Fetiben'ny lohahevitra maherifo amin'ny fety maherifo an'ny fetin'ny ankizy
Ny ho tonga maherifo indray mandeha amin'ny androm-piainany dia nofinofin'ireo zazalahy kely ary tiany ny mitafy toy ny maherifo. Ahoana raha miaraka mivory amin'ny fety ny mahery fo rehetra ary miara-mankalaza?
Fetin'ny maherifo ho an'ny ankizy ho an'ny zazalahy
Mba hampandrenesana ny rehetra dia mila karatra fanasana tsara izay mampitombo ny fanantenana.
Adiresy: Ilay "Flash" ratsy
Ho an'ity dia mila balaonina roa ianao, izay nopetahany lakaoly sy taratasy fanaovana asa-tanana. Aorian'ny fanamainana dia vaky ny balaonina, feno ny vatany ary miraikitra ny loha. Akanjo manompo ho akanjo lava. Mihantona eo afovoan'ny efitrano io tarehimarika io. Avy eo nokapohin'ireo maherifo tamin'ny hazo izy mandra-pahatapiny sy nianjera tamin'ny tany ny atiny. Ankehitriny ny maherifo rehetra dia afaka mandray ny sasany amin'ireo fandrobana ho valisoa.
Fanamafisana ireo maherifo
Ny filalaovana sy ny famonoana dia mahatonga anao ho noana. Noho izany dia mila sakafo sahaza azy koa ireo maherifo mba hitazomana tsara. Ka ny solomaso vaovao dia tsy ampiasaina miverimberina, ny zava-pisotro dia feno lalandrana ao anaty tavoahangy izay miraikitra amin'ny tandindon'ilay maherifo tsirairay avy ary mitafy kapa kely tsapa amin'ny vozona tavoahangy.
Miaraka amin'ny mololo dia mazava ho azy fa mahafinaritra be ny misotro ny super shower. Na inona na inona sakafo aroso, dia tokony hanana anarana tsara izy io. Superburger misy tehina herinaratra (french fries), bolna herinaratra (hena hena) miaraka amin'ny takamoa mahery fo (salady ovy) na izay rehetra eritreretinao. Tsy misy fetra ny sary an-tsaina. Ny zava-dehibe dia ny tian'ny rehetra.
Ary lalao mahery fo hafa
Kitapio ny kitapo ho an'ny maherifo: hanamboatra jiro ao anaty kitapon'ny maherifoko aho, hoy ilay maherifo kely voalohany. Mamerina azy ny faharoa ary mametraka ny ampahany manaraka ao anaty kitapo maherifony. Na izany aza, ny entana dia tsy maintsy mifanitsy amin'ny fitaovana mahery fo.
Ny gana gana dia azo antoka fa tsy iray amin'izy ireo, raha tsy hoe afaka manazava tsara izay kasainy hatao amin'izany ilay maherifo ary ny fomba fampiasana ilay gana eo amin'ny asany. Angamba ny tabataba mitabataba dia ao anatin'ny elanelam-potoana matetika ka tsy mahazaka mandositra ireo maherifo ratsy fanahy.
Pejy fandokoana maherifo
Ireo maherifo miloko